Magaalaa Moojootti meeshaaleen waraanaa, kemikaalli seeraan alaa sakkatta'insa tasaa taasifameen qabame - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright WKMoojooo
Magaalaa Mojootti meeshaaleen waraanaafi keemikaalli seeran alaa warshaalee keessatti dhokfamanii turan sakatta'iinsa tasaatiin qabame.
Meeshaaleen waraanaa gosa garagaraa 33, rasaasni meeshaalee kanneenii 1,691, keemikaalli heeyyama hin qabne kuntaalli 10,000 fi zayitni yeroon itti darbe liitirri 33,000 warshaalee keessatti seeran ala kuufamee argamuu kantiibaan magaalaa Mojoo Aadde Masarat Asaffaa himan.
Warshaawwan meeshaaleen seeran alaa keessatti argames warshaa huccuu Itiyoo-Jaappaan, warshaa Qalma Ammayyaafi Alergii Lunaa, warshaa Qalma Ammayyaa Orgaanik, warshaa gogaa Goojee, dhaabbata furdisa Loonii Moosheefi warshaa zayitii nyaataa Mojoo ta'uu eeraniiru.
Qawween Kilaashinkoovii 16 fi magaazinni rasaasaa 17 Wallagga Bahaatti qabame
Waraanni nageenya biyyattii bakkatti deebisuu danda'aa?
Gosti meeshaalee waraanaa qabamees kilaashii 11, Iskeezii 7, Immahoonii 2, Chiikoozii 3, Mintoofii 1, Domoftorii 1, Beeljigii 1 fi shugguxii 7 ta'uun himameera.
Keemikaalli omisha kopheetiif oolu kuntaalli 10,000 qabames warshaa Pilaastikaa Noovaa jedhamu kan hayyama malee warshaa qalma ammayyaa Orgaanik jedhamu keessatti hojjechaa ture keessatti ta'uus himaniiru.
Image copyright WKMoojoo
Warshaalee hojii idilee isaanitiin alatti meeshaalee waraanaa seeran alaafi keemikaalota hin hayyamamne kuusan kanneen adeemsi seeraan gaafatamoo gochuu eegalamuus eeran.
Magaalli Mojoo magaala saboonniifi sablammoonni baayyinaan keessa jiraatan waan taateef dhaabbileefi namoota dhuunfaa nageenya magaalattii yaaddoo keessa galchuuf socho'an ummanni eeruu kennaa akka jirus himaniiru.
Dhaabbileen alergii irratti bobba'anii hojii nageenya magaalattii yaaddoo keessa galchu hojjetan kunneenis imala jijjiiramaa biyyattiin keessa jirtu gufachiisuufi omisha gara alaatti erganiinis maqaa gaarii biyyattii waan miidhu hojjechuu malu yaaddoon jedhu jiraachuus Aadde Masarat BBCtti himaniiru.
Raayyaan Ittisaa Itoophiyaa nageenya boora'e bakkatti deebisuu danda'aa?